Red Mbiriso Rice Extract (RYRE) Supplements- Wisepowder
Chii Chitsvuku Yeast Rice Extract
Tsvuku mbiriso mupunga (RYRE) inoitwa apo imwe chaiyo mhando yeumbwa inozivikanwa seMonascus aimureus inosvina mupunga. Rice rinoshanduka rakasviba uye rinogadzira kemikari inozivikanwa se monacolin K ine mukurumbira kukosha. RYRE rave riri chikamu cheTCM (yechinyakare mishonga yechiChinese) kwemakore anopfuura gumi. Parizvino, inotengeswa sechinhu chekuwedzera uye sechikafu chehutano pasi rese.
Zvinoita Sei Red Mbiriso Rice Kunze Rinoshanda
HMG-CoA reductase enzyme inzira inoshandura mamorekuru inozivikanwa seHMG-CoA kuita mevalonate. Mevalonate imba yakakosha kuvaka chivakwa che1000s emamwe mamorekuru, senge cholesterol. Monacolin K inoshanda saiwo lovastatin mukuti inosungira kuHMG-CoA reductase inovhara kugadzirwa kwecholesterol.
Mevalonate inogona zvakare kushandurwa kuva yakakosha mamorekuru akadai coenzyme Q10 inoshanda senge antioxidant.
RYRE ine mamwe makomponi mukuwedzera kune monacolin K. Iyo zvakare ine yakaoma kunzwisisa yakakwana nzira kana ichienzaniswa ne lovastatin. Sekureva kwemasayendisiti, zvimwe zvikamu zvembiriso tsvuku yemupunga zvinogona kudzikisa njodzi yemhedzisiro inokonzerwa nemonacolin K. senge kushomeka kwemhasuru.
Ko Red Mbiriso Rice Kunze Zvinodhaka kana Chinowedzera?
Tsvuku mbiriso mupunga rinogona kutaurwa zvose zviri zviviri mushonga uye chinowedzera. Izvi zvinodaro nekuti imwe yezvakakosha zvikuru mune tsvuku yeast mupunga dhizaini inonzi monacolin K. Inotumidzirwazve se lovastatin icho chiri chinhu chinoshanda mumushonga unopihwa anonzi Mevacor. Saka, RYRE kune rumwe ruoko chinowedzera icho chinobatsira mukudzikisira cholesterol ukuwo kune rimwe divi, Mevacor drug inogadzira zvinodhaka inotaura kuti ine kodzero dzayo patent kumucheki we lovastatin.
Iyo lovastatin inganiswa mune tsvuku mbiriso mupunga inosarudzwazve seyakanyorerwa mushonga neFDA. Ndosaka RYRE ichinyongana seyese mushonga uye unowedzera.
Red Mbiriso Rice Kunze Kunobatsira
Zvinokurukurwa pazasi ndedzimwe dze tsvuku mbiriso mupunga bvisa zvakanaka:
Tsvuku mbiriso mupunga inobvisa lowers Cholesterol
Yakakwira mwero wecholesterol yakashata inyaya yehutano yakakomba ine chekuita nekufutisa, chirwere cheshuga insulin kushora, sitiroko, BP, uye chirwere chemwoyo. Imwe yenzira dzinoshanda kwazvo yekudzora huwandu hwecholesterol yakaipa uye kuchengetedza muviri wako kupokana nematambudziko ehutano kutora chikafu chine hutano uye mararamiro anoshanda. Nekudaro, vanhu vashoma vanogona kuve vanowanzo tenderera kumazinga akakwirira echolesterol yakaipa zvisinei nekutora matanho aya.
Tsvuku yeast mupunga inobvisa cholesterol inodzora mhedzisiro inokonzeresa kubva mukukwanisa kwayo kuwedzera HDL (yakanaka cholesterol) muropa uye nekuderera triglycerides uye LDL (yakaipa cholesterol). Tsvuku tsvuku mupunga inobvisa zvinowedzerawo kukanganisa uremu uye kuchengetedza zvakajairika leptin uye chiropa enzymes.
Muongororo dzinoverengeka dzaisanganisira vangangosvika zviuru zvisere vevatori vechikamu, vanhu vaitora Red yeast mupunga wekubvisa supplements vaive vadzikisa LDL (yakaipa cholesterol) uye yakazara cholesterol. Ivo vakasawanawo kukuvara kweitsvo kana chiropa basa.
Tsvuku Tsvuku Rice Rinodzikisa Lowers Kuzvimba
Kuzvidzivirira imhinduro yakajairwa neyekudzivirirwa kwedu kwakagadzirirwa kuchengetedza miviri yedu kubva kuzvinhu zvekunze uye kutapukirwa zvakanyanya.
Kureba kwenguva refu kuzvimba kunofungidzirwa kuti kunokonzeresa mamiriro akaita sehosha yemwoyo, chirwere cheshuga, uye kenza. Tsvagiridzo inoratidza kuti kutora tsvuku mbiriso mupunga zvinowedzera (RYRE) inogona kukubatsira kudzikisa kuzvimba uye kuwedzera nguva refu hutano hwakanaka.
Semuenzaniso, kutsvagurudza kunobatanidza vanhu makumi mashanu vane metabolic syndrome kwakaratidza kuti kutora tsvuku mbiriso yekuwedzera uye mafuta omuorivhi kwakadzora oxidative kusagadzikana mazinga ayo ari kukonzeresa kusagadzikana kusingaperi nekusvika pamakumi maviri muzana.
Saizvozvo, kumwe kuongorora kwemhuka kwakaona kuti makonzo nekukuvara kweitsvo ayo akapihwa tsvuku mbiriso mupunga unodzora hupfu hwakadonhedza huwandu hwemapuroteni akapindirana nechirwere.
Tsvuku Tsvuku Rice Rinotora Ine Anowana Anticancer Nzvimbo
Humwe ufakazi kubva kumhuka nemaselula zvidzidzo zvinoratidza kuti tsvuku mbiriso rinobvisa rinogona kubatsira mukuderedza kupararira nekukura kwemasero ekenza. Imwe tsvakurudzo yakataura kuti kupa makonzo nekenza yeprostate yeast yeast mupunga kubvisa poda kwakadzora huwandu hwe tumor mukuenzanisa neboka rinodzora. …
Kuongororwa-tube yekutsvakiridza kwakaratidzawo kuti kuisa mutsvuku yeast mupunga wekubvisa hupfu kune maseru ekenza yeprostate kwakadzora kukura kwemasero ekenza kusvika pakakura kupfuura lovastatin.
Tsvuku mbiriso mupunga Inovandudza Bone Hutano
Mune kumwe kuongorora kunosanganisira makonzo, tsvuku mbiriso inodzora poda yakadzikisa mapfupa kurasikirwa mumakonzo ane osteoporosis. Makonzo akapihwa mutsvuku mbiriso mupunga aive nehutano hune masero mapfupa uye yakakwirira pfupa yemaminera density kupfuura placebo.
Red mbiriso mupunga rinosimudza BMP2 gene kutaura, izvo zvakakosha pakurapa mapfupa kupora.
Tsvuku Tsvuku Rice Kubvisa Dosage
Rangarira kuti huwandu hwemusanganiswa wakakosha unozivikanwa se monacolin unogona kusiyana mune tsvuku yeast mupunga wekubvisa supplements. Izvi zvinodaro nekuti kune akati wandei akaparadzaniswa mbiriso nemhando dzakasiyana dzekuvirisa dzinoiswa. Tsvagurudzo yezvakasiyana zvitsvuku mbiriso mhando mhando zvinowedzera kuti monacolin zvemukati kubva zero kusvika 0.58 muzana.
Kunyangwe hazvo zvidzidzo zvakasiyana zvakaratidza imwe mbiriso tsvuku yemupunga kuburitsa muyero, haugone kunyatso kuzivisa kana iyo rauri kushandisa richava nemonacolin yakakwana Saka zvakakosha kuti ugare uchitarisa monacolin zvemukati zvekuwedzera usati wafunga nezve chii tsvuku mbiriso mupunga kushandisa.
MuTCM (Chinyakare Chinese Chiremba), iyo tsvuku yeast mupunga dosage yakakurudzirwa inogona kunge yakakwira. Nekudaro, zvimwe zvidzidzo zvakashandisa red mbiriso mupunga kubvisa 600 mg dhiini pazuva. Zvimwe zvidzidzo zvinokurudzirawo kutora red mbiriso mupunga kubvisa 1200 mg kaviri pazuva.
Red Mbiriso Rice Kunze Side Mhedzisiro
Inokurukurwa pazasi ndeimwe emucheka mutsvuku weast mbiriso mativi;
Mune vanhu vazhinji, Red mbiriso mupunga inowanzochengeteka kana ikatorwa nemuromo zvakanyanya kusvika pamakore mana nemwedzi mitanhatu. Izvi zvinoenderana neNational Institutes of Health (NIH).
Lovastatin inowanikwa mune akasiyana zvigadzirwa zvetsvuku mbiriso mupunga. Akanyanya kuwanda ezvitoro zvinokonzeresa mhando dzakasiyana dzemupunga mutsvuku weti mhedzisiro senge yakanyanya kukuvara kwemhasuru kukuvara uye kukuvara kwechiropa neitsvo. Lovastatin yakasununguka kubva kune yeast yeast mupunga inogona kuratidza mhedzisiro yakafanana.
Citrinin inogona zvakare kunge iine tsvuku mbiriso mupunga kana yakavira zvisakafanira. Citrinin chinhu chine chepfu uye chinogona kukuvadza itsvo. Mimwe mbiriso tsvuku yemupunga zvinetso zvinogona kusanganisira kupisa moyo, kutemwa nemusoro uye kushungurudzika mudumbu.
Red Mbiriso Rice Kunze Kudhira zvinodhaka
Zvinodhaka izvo zvinoderedza cholesterol
Kunze kwekunge pasi pechinyorwa chechiremba, iwe haufanirwe kudya tsvuku mbiriso mupunga pamwe nemishonga inoderedza cholesterol. Tsvuku mbiriso mupunga inogona kusimbisa kukanganisa kwemishonga iyi. Izvi zvinoita kuti njodzi yekukuvadza chiropa ive yakakwira. Kana iwe uri pasi pe statin kana chero chero imwe zvinodhaka che cholesterol inoderera, bvunza chiremba wako usati watora tsvuku yeast mupunga.
Nhanho dzeCoQ10 dzinogona kudzikiswa nema statins. CoQ10 yakakosha zvakanyanya muhutano hwemhasuru nemoyo. Inobatsirawo mukugadzirwa kwesimba. Kushaikwa kweCoQ10 yakakwana kunogona kutungamira kuneta, kurwadziwa kwemhasuru, kukuvara uye kurwadziwa. Pamusoro pezvo, Mbiriso tsvuku mupunga inoderedza huwandu hweQQ10 mumuviri. Kana iwe uchida kutora CoQ10 uye uchiri kushandisa tsvuku mbiriso mupunga zvinhu, nyoro bvunza chiremba wako.
Red Mbiriso Rice Kunze Kunowedzera
Zvekuwedzera zvine mutsvuku mbiriso mupunga zvakatengeswa muUS kwenguva yakareba. Vanoderedza cholesterol nemamwe lipids mumidziyo yeropa revanhu. Makore apfuura aya ruzivo rwuripo ndi2008 uye 2009. Zvokudya zvinowedzera yetsvuku mbiriso mupunga dzakatengeswa nemamiriyoni makumi maviri emadhora gore rimwe nerimwe. Sezve paNational Health Bvunzurudzo mu20, mamirioni 2007 vakapindura vese vaive maAmerican vakanga vashandisa cholesterol yekudzora hutano.
Iwe zvisinei iwe unofanirwa kuve unongwarira kana uchitenga izvi zvinowedzera nekuti zvimwe zvigadzirwa kunyanya kubva kune zvisiri-zvinotengesa vatengesi hazvina kuchengeteka. Mamwe acho anowedzera anogona kunge aine zvinosvibisa izvo zvinogona kukuvadza.
Tsvuku mbiriso mupunga bvisa kupi kutenga
Kana iwe uchida kutenga iyo yakanakisa mbiriso mutsvuku yekuwedzera mbesa, chitoro chakakodzera kushambadza pamhepo nekutsvaga kambani ine makore mazhinji eruzivo mukugadzira mishonga yemakwenzi. Tarisa u kambani iyo yakaisa mari zvakanyanya mukutenga kwemidziyo yekugadzira yechinyakare.
Zhao SP, Lu ZL, et al. Xuezhikang, chidimbu che cholestin, chinodzora zviitiko zvemoyo mune varwere chirwere cheshuga 2 vane chirwere chemoyo chemoyo: ongororo yevarwere vane chirwere cheshuga chechipiri kubva kuChina coronary sekondari yekudzivirira kudzidza (CCSPS). J Cardiovasc Pharmacol. 2 Feb; 2007 (49): 2-81.
Peng D, Fong A, Pelt AV (2017). "Ongororo Yekutanga: Mhedzisiro yeRed Mbiriso Rice Rutsigiro paCholesterol Levels muVakuru". Ndiri J Mukoti. 117 (8): 46-54. .
Wang J, Lu Z, Chi J, Wang W, Su M, Kou W, et al. Multicenter kiriniki kuyedzwa kwe serum lipid-kuderedza miganho yeMonascus aimureus (tsvuku mbiriso) gadziriso yemupunga kubva kune yeChinese mushonga. Curr Ther Res. 1997; 58 (12): 964-978.
1.Chii chinonzi Tsvuku Yembiriso Rice wabvisa
2.Ko Red Yeast Rice Inobvisa Basa
3.Iye Red Yeast Rice Inobvisa Chinodhaka kana Chinowedzera?
4.Red Yeast Rice Bvisa Kubatsira
5.Red Mbiriso Rice wabvisa Dosage
6.Red Yeast Rice wabvisa Mativi Ekupedzisira
7.Red Yeast Rice Bvisa Kubatana Kwezvinodhaka
8.Red Yeast Rice Bvisa Zvokuwedzera
9.Red mbiriso mupunga wabvisa kwaunotenga